Shiinaha KA DIGTOON WADAJIRA TELEFOONADA TELEFOONKA KHATARAHA | APS
Pcba Waayo xeedho Fast
Nalalka Awooda Korantada ee LED
Custom PCBA iyo Custom Quick xeedho
Shipping Oo Payment
KA DIGTOONOW QARAXYADA TELEFOONKA KHATARTA LEH
KA DIGTOONOW QARAXYADA TELEFOONKA HALISTA AH
Way nagu dhacday dhamaanteen. Waad baxaysaa oo waad ogaanaysaa oo taleefankaaga ayaa hoos u dhacaya. Gaar ahaan waa wax caadi ah markaad safreyso. Meelaha garoonka diyaaradaha lagu sugo waxay had iyo jeer leeyihiin kooxo reer miyi ah oo isugu jira hareeraha meelaha laga baxo iyo xargaha korontada.
Nasiib darrose, khayaano la yiraahdo "casiir xirashada" ayaa ka dhigaysa lacag qaadashada taleefankaaga ama kaniiniga mid khatar ah. Casiirista casiirradu waxay dhacdaa markii dekedaha USB-ga ama fiilooyinka ay ku dhacaan fayraska. Markaad ku xirtid fiilada cudurka qaba ama dekedda, kuwa wax khiyaameeya ayaa ku jira. Waxaa jira 2 nooc oo hanjabaado kala duwan ah. Mid waa xatooyada xogta, waana sida ay u egtahay. Waxaad ku xirmeysaa deked ama kayb khaldan oo furayaasha sirta ah ama xog kale ayaa lagaa xadi karaa. Ta labaadna waa rakibidda furin. Markaad ku xirmato dekedda ama fiilada, fure ayaa lagu rakibay qalabkaaga. Xitaa ka dib markaad furka furato, furinku wuxuu ku sii jiri doonaa qalabka ilaa aad ka saarto.
Illaa iyo hadda, xinjirowga casiirku uma muuqdo dhaqan guud. Kooxda jabsiga darbiga ee Idaha waxay cadeeyeen inay suurtagal tahay, marka dadweynuhu waa inay ka digtoonaadaan-gaar ahaan maadaama fiilooyinka USB-ga ay u muuqdaan kuwo aan dhib lahayn.
Sideed isu ilaalin kartaa?
1.Waxaa aad qaadataa darbijiifyadaada ( Wall Chargers) iyo car chargers with you when you’re traveling.
Ha isticmaalin fiilooyinka laga helo meelaha dadweynaha.
3.U isticmaal Wall Chargers, ha u isticmaalin saldhigyada USB-ka ee lacag-bixinta, marka taleefankaagu hooseeyo.
4.Bibaado keydinta batteriga la qaadan karo oo ku sii hayso haddii ay jirto xaalad degdeg ah.
5.Hayso barnaamij anti-malware ah sida Malwarebytes qalabkaaga oo aad si joogto ah baaritaan ugu sameyso.
Waqtiga boostada: Dec-11-2020
Fast Charge Car xeedho Iyadoo Cable, Fast Charge PCB Desgin , koronto Adatpter Pcba , USB Desgined xeedho , Mobile xeedho , USB adabtarada ,